Sakafo akoho - Recipe | Recipe
Alicia tomero | 30/10/2021 17:54 | Menus ho an'ny ankizy, fomba fanamboarana, Resipeo akoho
Ireo kely mofomamy mofomamy ho tia azy ireo ianao. Namboarina tamim-pitiavana be izy ireo mba hahafahanao manao empanada antsasaky ny siny ary mahafinaritra izy ireo. Ny famenoana azy no tena akora fototra Akoho sy anana, miaraka amin'ny koba manokana mba ho tonga lafatra amin'ny mofomamy mofomamy. Sahia manandrana azy ireo fa samy hafa izy ireo ary matsiro.
Raha tianao ny fomba fahandro misy famenoana dia azonao atao ny manandrana manamboatra ny anay. 'pancake misy ovy sy hena voatoto'.
Fotoana fiomanana: 45 M
Fotoana manontolo: 1 h 15 min
Tongolo kely 1
Karaoty lehibe 1
2 sotrokely voanjo manta na mangatsiaka
Katsaka masaka 2 sotrokely
Lafarinina varimbazaha 2 sotro fihinanana
Ronono iray vera iray vera
Atody 1 hanosotra
Tetehina manify izahay ny tongolo ho ampahany kely. Manasa sy mihosotra izahay ny karaoty ary koa ny hotetehina madinika isika. Mandraraka menaka oliva amin'ny lapoely lehibe izahay ary rehefa mafana dia ampiana tongolobe sy karaoty. Avelantsika hanendasany iray minitra.
Notapahinay ny akoho kely voatetikas ary ampio ny saosy, asio sira sy dipoavatra mainty.
Manampy ny pitipoà sy katsaka ary avela ho masaka mandritra ny minitra vitsivitsy.
Manampy ny roa tablespoons ny lafarinina varimbazaha ary omentsika indroa ny mahandro.
Nandefa izahay ny ronono, Avelantsika mafana mandritra ny segondra vitsy izany ary manomboka mihodina isika mba hamoronana faobe compact.
Mametraka ny koba izay noforoninay ao anaty lasitra tsirairay izay afaka miditra ao anaty lafaoro.
Manomana ny puff pastry, manapaka efamira kely izay mandrakotra ny lasitra izay haleha ny famenoanay.
Manarona izahay miendrika satroka ny lasitra miaraka amin`ny puff mofomamy sy handravaka amin`ny strip kely. Manao izahay tapaka telozoro kely ka mifoka rivotra ny koba rehefa mahandro ao anaty lafaoro. Kapohina ny atody sy ny borosy eo ambonin’ilay “puff pastry”. Izahay dia mametraka azy ao anaty lafaoro miaraka amin'ny hafanana miakatra sy midina 180 ° mandritra ny 15 minitra. Rehefa masaka dia azo atao mafana izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: levitra » Menus ho an'ny ankizy » Pie akoho